Qarax ka dhacay Muqdisho – hareerley News
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qarax Miino oo ka dhacay Agagaarka Haanta dheer ee Magaalada Muqdisho sidda ay warbaahinta u Xaqiijiyeen dadka degaanka.
Qaraxa ayaa ahaa Mid lagu aasay wadada dhinaceeda ilaa iyo haddana si rasmi ah looma Ogga Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Sidda dadka degaanka ay sheegeen Qaraxa ayaa ka dhacay wadada u baxda xarunta Maamulka degmada Dayniile gaar ahaan meel ku dhow isbitaalka Guutaale.
Ciidanka Booliska degmada Dayniile ayaa gaaray goobta uu Qaraxu ka dhacay, waxaana la sheegay in ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo Ammaanka lagu xaqiijinaayay.
Kulan looga hadlayay ka hortagga COVID-19 oo Muqdisho lagu qabtay:-(Sawiro)
Gudiga Heer qaran ee wacyi galinta Coved-19 oo Maanta kulan ku yeeshay Xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa iska wareysatay guulihii gudiga garay 2-di todibaad ee la soo dhaafay. Waxay ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in ay u dhaga nuglaadaan talooyinka xeel dheerayaasha cafimaadka si aynan u noqon Dalka kaliya ee Cudurkan ku daray. Soomaaliya […]
Xisbiga Mucaaradka Kenya Oo doonaya in ay Isbadal ku Sameeyaan Xisbigooda ODM
Madaxa xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga ayaa sheegay in isbeddel ballaaran lagu sameeyn doono xubnaha xisbigiisa ee ODM. Mr. Odinga ayaa amray in ay dib u Eegis ku sameeynaayo xubnaha guddiyada kala duwan ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee ku matalo ODM. Waxaa uu hoosta ka xarriiqay in isbeddeladan ay qeyb ka […]
Gudoomiyaha Magaalada Marka Oo Kulan la yeeshey Maanta Nabadoonada, Waxgaradka iyo Dhamaan Bulshada qeybaheeda kala duwan:(Sawiro)
Waxaa maanta ka dhaacay Magaalada Marka Kulan ay kasoo Qayb galeen Maamulka, Nabadoonada, Waxgaradka iyo Dhamaan Qeybaha Kala Duwan ee Bulshada Ku dhaqan Degmada Marka kulankan ayaa lagu qabey Hotelka Madiina Ee Magaaladaasi. Kulanka ayaa waxaa Shir Gudoominayay Duqa Magaalada Marka ahna Gudoomiyaha Degmada Marka Mudane Cabdulahi Cali Axmed (Waafow), Kulankan ayaa Waxaa looga Hadlayey […]
Beesha Caalamka Oo loo Aqbaley Codsigooda Dib u dhigista Mudada Doorashooyinka Jubaland iyo Gudiga Doorashooyinka Oo soo saarey Go’aano Cusub.